My Love, My Bride(2014) - Myanmar Asian TV Channel
အခုကားလေးက နာမည်ကြီးသရုပ်ဆောင်၂ယောက်ဖြစ်တဲ့ ဂျိုဂျန်ဆပ်နဲ့ မင်းသမီးချောလေး ရှင်းမင်းအာတို့ပါဝင်ထားတာပါ။
ကားလေးနာမည်ကတော့ My love my brideပါ။ ဒီကားမှာတော့ မင်းသမီးလေးကပန်းချီဆရာမလေး မီယောင်းအဖြစ်သရုပ်ဆောင်ထားပြီး မင်းသားကတော့ လူမှုစောင့်ရှောက်ရေးစင်တာက ဝန်ထမ်းလေး ကဗျာတွေရေးရတာဝါသနာပါသူ ယောင်းမင်အဖြစ်သရုပ်ဆောင်ထား ပါတယ်။
ခဏခဏရန်ဖြစ်လ်ုက် ပြန်ချစ်လိုက်နဲ့ ချစ် သူသက်တမ်းကြာမှလက်ထပ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ သူတို့နှစ်ယောက် လက်ထပ်ပြီးခါစမှာ အဆင်ပြေချော့မွေ့နေပေမယ့်….
နောက်ပိုင်းမှာတော့ အချစ်ဦးနဲ့ပြန်တွေ့တဲ့အခါ တယောက်နဲ့တယောက် အထင်လွှဲမှုတွေ အဆင်မပြေမှုတွေကြုံလာတဲ့အခါ ဆက်ပြီးအဆင်ပြေပါ့မလား Happy ending လေးဖြစ်မလား Sad ending လေးဖြစ်မလားဆိုတာ ကြည့်ကြည့်လိုက်နော်😉
Translator : Inggin
File size : around 569MB
Myanmar Asian TV Channel မှ တင်ဆက်သည် ။
Actors: Bae Seong-woo, Go Gyu-pil, Jo Jung Suk, Lee Si-eon, Ra Mi Ran, Seo Kang-joon, Shin Min-A
Openload.co Myanmar Blueray 720p Download Soliddrive.co Myanmar Blueray 720p Download
Monster Hunt2လေးကို HDTC Ver. လေး တွေ့တာနဲ့ တင်ပေးလိုက်ရပါတယ် … အရင်တင်နေကြလို မကြည်ပေမယ့် ကြည့်ရတော့ အတော်လေး အဆင်ပြေပါတယ် … ဖုန်းနဲ့ ကြည့်နေကြ လူတွေအတွက်တော့ အဆင်ပြေစေမှာပါ … WEB-DL ( ဒါမှမဟုတ် ) Blu-ray ထွက်လာခဲ့ရင်လည်း ထပ်ပြီး update လုပ်ပေးသွားပါ့မယ်…
ဒီတရုတ်ကားလေးက 2017 Aprilလောက်မှာ ထွက်ရှိထားတာဖြစ်ပြီး Romance & Comedy movie လေးတစ်ခုပါ … ဇာတ်လမ်းလေးကတော့ ကျူးဟုန် ဟာချမ်းသာတဲ့သူဌေးသားလေးဖြစ်ပြီး … သူ့ချစ်သူကောင်မလေး မိုမိုကို propose လုပ်ဖို့ပြင်ထားတဲ့ပွဲမှာ … လူမှားပြီး ထျောင်နန်နန် ဆိုတဲ့ကောင်မလေးကို မှားယွင်းပြီး propose လုပ်မိတဲ့အခါမှာတော့ … ဘာတွေဆက်ဖြစ်မလဲ …? ကျူးဟုန် ကရော…
ဒီနေ့လိုပိတ်ရက်မှာမိုးအေးအေးလေးနှင့်ကြည့်နိုင်ဖို့ Japan Live Actionလေးတစ်ကားကိုတင်ပေးလိုက်တယ်နော် 2017 Marchမှာထွက်ရှိထားပြီး IMDb လည်း 5.1ရရှိထားတဲ့ဇာတ်လမ်းကောင်းလေးပါ ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းလေးကတော့ – ကကိုမိုတယ ဆိုတဲ့အထက်တန်းပထမနှစ်တက်နေတဲ့ကျောင်းသူလေးဟာ ယောက်ျားလေးသူငယ်ချင်းမရှိသေးပါ … တစ်နေ့မှာတော့သူကတက္ကသိုလ်ကျောင်းသူအနေနှင့်ဟန်ဆောင်ပြီး Blind Date ပွဲကိုသွားခဲ့ပါတယ် … အဲ့ပွဲမှာ ကိုတဆိုတဲ့၂၃နှစ်အရွယ်ကောင်လေးတစ်ယောက်နှင့်တွေ့ဆုံခဲ့တယ် … ကကိုနှင့်ကိုတဟာတွေ့တွေ့ချင်းမှာပဲအချင်းချင်းစိတ်ဝင်စားမိခဲ့ကြတယ် .. ဒါပေမဲ့ ကိုတဟာရဲဝန်ထမ်းတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး ကကိုက အထက်တန်းကျောင်းသူလေးဖြစ်နေတာ သိသွားတဲ့အခါမှာတော့သူမကိုကြိုက်ပေမယ့်လည်း…
Imagine You and Me ( 2016 )
Romance ကားလေးတွေကြည့်ချင်သူတွေအတွက် Philipine romance movie ကားကောင်းလေးပါ 2016မှာထွက်ရှိထားပြီး IMDb မှာလည်း 6.5ရထားတဲ့ကားလေးပါ ဇာတ်လမ်းလေးကတော့***** အခက်​အခဲ​တွေ ရှိ​ပေမဲ့ ​ပျော်​​ပျော်​ ​နေတက်​တဲ့ ​ကောင်​မ​လေး ဂါရာ….. တစ်ဖတ်သတ်ချစ်ကာအသဲ ကွဲ​နေတဲ့ ခပ်​ဆိုးဆိုး ​ကောင်​​လေး.အန်ဒရူး …… ​သူတို့နှစ်ယောက်ဟာအချစ်မြို့တော်ဖြစ်တဲ့ အီတလီမြို့မှာတွေ့ဆုံမိကြတဲ့အခါမှာတော့……. Happy ending ဖြစ်မလား sad endingဖြစ်မလားဆိုတော့ ဒီကားလေးထဲမှာကြည့်ကြပါစို့…